နျူကလီးယား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖြင့် လုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု အိန္ဒိယ ဆို - Yangon Media Group
နျူကလီးယား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖြင့် လုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု အိန္ဒိယ ဆို
နယူးဒေလီ၊ ဧပြီ ၂
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နျူကလီးယား လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေါင်းဖို ၂၂ ခု ရှိရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၆၇၈ဝ ကို ထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ နျူကလီးယားဓာတ် ပေါင်းဖိုများမှာ တောင်ပိုင်းပြည်နယ် တမီးလ်နာဒူး၊ ကာနာတာကာနှင့် အနောက်ပိုင်းပြည်နယ် ရာဂျက်စ်သန်၊ ဂူဂျာရတ်နှင့် မဟာရတ်ရ်ှထရာ ပြည်နယ်တို့၌ တည်ရှိကြသည်။
ဓာတ်အားပေးမှု တိုးတက်လာ သည်ကို သံသယရှိစရာမလိုကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်ကထက် ပို များလာကြောင်း၊ အလွန်ဝေးကွာ သော ကျေးရွာများအထိ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးပြည်နယ် ဥတ္တရာပရာ ဒတ်ရှ်၊ ဘီဟာ၊ မဒယာပရာဒက်ရှ်၊ မဟာရတ်ခ်ျထရာ၊ ရာဂျက်စ်သန်၊ တေလင်ဂနာနှင့် သြရိဿပြည်နယ် တို့တွင် ကျေးရွာများ လျှပ်စစ်ဓာတ် အား ရရှိနေကြပြီဟုဆိုသည်။ ယခင်က ကျေးရွာများတွင် ဓာတ်အား နှစ်နာရီမှ သုံးနာရီသာ ရသော်လည်း ယခုအခါ တစ်နေ့ လျင် နာရီ ၂ဝ ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ စာ ရင်းအရ ကျေးရွာပေါင်း ၁၅၁၈၃ ရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ပြည်နယ် ၁၃ ခုမှ ကျေးရွာ ၂၂၁၇ ရွာသာ လျှပ်စစ်ရရန် ကျန်နေသည် ဟုဆိုသည်။ ယခုနှစ် မေလတွင်အ ဆိုပါကျေးရွာအားလုံး လျှပ်စစ်မီး များ ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။
ယခင်နှစ်များက နျူကလီး ယား လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုအရေ အတွက် တိုးလာ၍ လျှပ်စစ်မီး လုံ လောက်စွာ ရရှိလာခြင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုတချို့အား နိုင်ငံ ခြားတိုင်းပြည်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ရုရှားလိုနိုင်ငံများ ပါဝင်ကြောင်း၊ အများစုမှာ အိန္ဒိယ က မိမိဘာသာ ကြိုးစားအားထုတ် လုပ်ကိုင်မှုများ ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ အိန္ဒိယ နျူကလီးယားပညာ ရှင်တို့သည် နျူကလီးယားပါဝါ ထုတ်လုပ်ရေးကို မိမိဘာသာ ကြိုး စားသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
နျူကလီးယား ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်ရန် အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်တို့ နှင့်လည်း သဘောတူလက်မှတ်ရေး ထိုးထားသည်။ သို့ရာတွင် နှစ်များ စွာ ကြာသော်လည်း အလုပ်မဖြစ် ပေ။ အကြောင်းမှာ အမေရိကန် Westernhouse ကုမ္ပဏီနှင့် ပြင်သစ် ၏ AREVA ကုမ္ပဏီတို့ မခိုင်မာ ၍ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်နှင့် နျူကလီးယားလုပ် ငန်းကို ယခုနှစ်တွင် စတင်မည်ဟု ဆိုသည်။ ရာဂျက်စသန်တွင် မဂ္ဂါ ဝပ် ၇ဝဝ နျူကလီးယားစက်ရုံ ပြီး လုနီးပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဂျေကာ ပူရှိ မဂ္ဂါဝပ် ၁၆၅ဝ ရှိ နျူကလီးယား စက်ရုံလည်း ပြီးစီးတော့မည်ဟုဆို သည်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများက ငွေ ကြေးခက်ခဲ၍ မလုပ်နိုင်သော်လည်း အိန္ဒိယက ၎င်း၏ နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကို ကိုယ့် အားကိုယ်ကိုးစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကျေးရွာများကိုလည်း မကြာ မီ ၂၄ နာရီပတ်လုံး လျှပ်စစ်ဓာတ် အား ပေးနိုင်တော့မည်ဟုဆိုသည်။
မြောက်ကိုရီးယားတွင် ဖျော်ဖြေခဲ့သည့် အနုပညာရှင်များ၏ ဖျော်ဖြေမှုကို တောင်ကိုရီးယားတွင် ဧပြ?
ကွန်မြူနတီဒိုင်း ရယူခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုများ စတင်ရန် ဆာရီရည်မှန်း၊ သားများကို ဂုဏ်ပြုပြ
ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတားသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးစင်္ကြံများကို ဆက်သွ?
ရာသီသစ်တွင်ဝတ်ဆင်မည့် PUMA ဂျာစီသစ်ကို မန်စီးတီးအသင်းမိတ်ဆက်၊
မေတ္တာသည် စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်၊ မေတ္တာထားနိုင်မှ တိုင်းပြည်အေးချမ်းနိုင်မည်
ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အိမ်ရာတစ်သန်း စီမံကိန်းအတွက် အာမခံကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မ